Waxyaalaha Sabtida | Martech Zone
Sabtida, Maarso 3, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Wiilkeyga, Bill, ayaa hogaaminaya wax soo saarka codka ee waxqabadkiisa Dugsiga Sare ee Wizard of Oz. Gabadhayda ayaa sidoo kale ku jiri doonta iyada oo ciyaareysa mid ka mid ah xamaaradaha. Katie waxay durba heshay dib u eegis geesinimo leh dadka ciyaarta kahadlaya the runtii waa qabow maadaama ay kaliya dhigato Dugsiga Dhexe! Waxay u ahayd fidi iyada xitaa inay awoodo inay gasho ciyaarta. Gabi ahaanba way jeceshahay, in kastoo. Marwalba waan layaabay tayada labada caruurtayda.
Sidaad qiyaasi karto, maalmahayga iyo habeennadayda hadda waxaa ka buuxa heeso ka yimid Wizard of Oz. Wiilkaygu wuxuu mar kale ku qoray "Haddii aan Qalbi kaliya yeelan lahaa" nooc acoustic casri ah. Ma uusan sameynin banaanka guriga, in kastoo. Waxaan doonayay inaan ku dhiirigeliyo wax yar si uu kaliya u qaato gitaarka una ciyaaro inta lagu jiro nasashada tababarka maanta.
Markii aan ku arkay fiidiyowgan 3R.e.Medium, waan tusay oo way ku dhiirrigelisay inuu gitaarkiisa keeno ku celcelinta maanta. Wiilkaygu dhib kuma qabo inuu madadaaliyo dad badan… laakiin maahan dad badan oo aan wax fikrad ah ka haysan waxa soo socda. Bal qiyaas waxqabadka tareenka dhulka hoostiisa mara ee Paris! Taasi waa waxa dadkan hibada lihi ay sameeyeen:
Waxaa laga yaabaa inay tani kugu dhiirrigeliso! Waxay u waxyooday wiilkayga!
PS: Xalay anigana waan lahaa Bill kirada Wiz si aan u helno isbedel xawaare ah. 😉
Maskaxda Sharp: Blogging in Corporate America
Ma lihi hibo muusiko laakiin waxaan marwalba doonayay inaan ku socdo meel oo aan hooyada ka saaro, waxaan damiyay Quincy Jones, mashquul gaabis ah si aan tan u hubiyo, kaliya ka fikir Doug, tani waxay noqon kartaa adiga, aniga iyo Chris oo aan ku degno EL-ka Chicago, ha la isku dayo. fikrad fiican, adiga iyo Chris iskuday aniguna waan qaban doonaa camka viedo! shaqo weyn
Waxaan kula jiraa midkaas, JD! Waan xambaari karaa qoraal waxaanan awoodi jiray inaan qoob ka ciyaaro qiyaastii 100 lbs kahor. Waxaan usheegayaa wiilkeyga markuu hodanka yahay oo uu caan yahay inaan ugu yaraan hal hees laqaado masraxa.
Waxaan u maleynayaa inuu walwalsan yahay. 🙂
Nonpoint waxay leedahay nooc weyn oo dhagaxan ah oo Dareem (hawada hawada) sidoo kale.
Waan ka xumahay, waxay ahayd waddo qarsoodi ah oo lagu sii daayay Mushroomhead
Albamkee buu ahaa kani? Wiilkaygu wuxuu jeclaan jiray Mushroomhead. Anigu waxaan ahay taageere SlipKnot naftayda… gaar ahaan taraafikada waxaanan jeclaan lahaa inaan xanaaqayga ka baxo. Ama taasi ama BIG caan ah (Wax walba waan dhageystaa!).
Haye – Aad baan uga helay kooxda. Waad ku mahadsantahay wadaagidaada. Wax kasta oo kale wali madaxayga ayey marayaan! (ps. Waxaan ubaahanahay inaan u sheego Mike inuu waxyaabo badan ka helo bartiisa!)